२६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उप`चारपछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृ`त्यु » बुद्ध भूमि नेपाल
यो साता चम्किदै छ यी राशिको भाग्य ! हेर्नुहोस् असोज ३ गते देखी असोज ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
फेरि भेरी नदीमा हाम फालेर पानीमै बि’लिन् भइन् ए’कजना ३१ वर्षीय महिला(भिडियो सहित हे’र्नुहोस्)
अनुमतिबिना छोरीको कपाल का’टेको भन्दै बुवाद्वारा विद्यालयवि’रुद्ध १० लाख डलर क्षतिपूर्तिको मु’द्दा
जब सानी बच्चीले बाबुको निन्द्रा बोलाउन यस्तो सम्म गरिन, लाखौले हेरे भिडियो
यसकारण एयरलायन्सको एउटा उडानबाट बाहिर निकालीईन यी महिला
दशैको मुखमा खतरा हुने भन्दै नेपाल प्रहरीले थाल्यो कडाइ
दुर्घटनामा मृत्यु भएकी भनिएकी सपना यस्तो अवस्थामा फेला परिन, परिवारमा पनि चकित
संसारकै सबैभन्दा महंगो २६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने औषधि`ले पनि ११ महिनाकी बालिकालाई ब`चाउन सकेन ।
यी बालिकालाई यो अत्यन्तै महंगो पर्ने औषधिको सुई लगाइएको थियो तर यी बालिका वेदिका शिन्देको मृ`त्यु भएको छ । आइतबार राती सास फेर्न स`मस्या भएपछि उनलाई पुणेको एक अस्प`तालमा भर्ना गरिएको थियो । अबेर राती उनको मृ`त्यु भएको छ ।
महाराष्ट्रको पिंपरी चिंचवाडका सौरभ शिन्देकी छोरी वेदिकालाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रफी (एसएमए) नामको जेनेटिक स्वास्थ्य स`मस्या थियो । उनको उप`चारको लागि उनका मातापिताले क्राउडफण्डिङमार्फत हजारौं जनाबाट सहयोग उठाएर २६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर अमेरिका|बाट जोलगेन्स्मा नामको इन्जेक्सन मगाएका थिए । यो रोगको यही अन्तिम उपचार मानिन्छ ।
वेदिका|लाई जुन महिनामा यो इन्जेक्सन लगाइएको थियो । त्यसपछि पूरै परिवार निकै खुसी थिए र वेदिकाको कहानी सामाजिक संजालमा निकै भाइ`रल भइरहेको थियो । तर, यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन र वेदिकाले आइत`बार संसारबाट विदा लिइन् ।
वेदिकाको यसरी मृ`त्यु भएपछि परिवार र उनलाई सहयोग गर्नेहरु शोकमा छन् । यति महंगो औष`धि दिइसकेपछि पनि वेदिकाको मृ`त्यु कसरी भयो भन्ने विषयमा मानिस`हरु प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
२ आश्विन २०७८, शनिबार १८:०८
विश्वकै दुई ठूला प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागर एकआपसमा भेटिँदा यिनीहरुको पानी किन मिसिँदैन ?
३० भाद्र २०७८, बुधबार १७:३०
डेनको टाउकोमा कपालको सट्टा सुन र हीराको चेन
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १८:३१
कसरी बन्छ कोकाकोला? संसारमा २ जनालाई मात्र थाहा छ ! को हुन् उनीहरु ?
२८ भाद्र २०७८, सोमबार २२:१४
आफ्नै सुरमा यी ब्यक्ति मोटरसाइकलमा हिँडिरहेका थिए, प्रहरीले शंका लागेर हेलमेट खोलेर हेर्दा चकित पर्‍यो
२८ भाद्र २०७८, सोमबार ११:०६
‘वेडिङ फोटोशुट’का क्रममा १९०० फिट उचाइमा बेहुलीले श्रीमानको हात छोडेपछि…
२७ भाद्र २०७८, आईतवार ११:१०